naxaasta budada ah ee loo yaqaan 'zirconium alloy alloy', Zr-Cu - Goodao Technology Co., Ltd.
Daawada Zirconium copper alloy Zirconium - alloy copper waa xulashada ugu fiican ee la xiriirida wareegga sababtoo ah habdhaqan wanaagsan iyo kuleylka kuleylka. Haddii xiriiriyaha furaha uu jaro wareegga, qaanso-soo-baxa ayaa culeys badan saaraya maaddada, taas oo ah waxa heerkulka sare ee chromium sameeyo. Chromium wuxuu hagaajin karaa caabbinta qallajinta walxaha, waxayna leedahay iska caabin fiyuus wanaagsan, waxayna ka hortagi kartaa isku xirnaanta naxaasta jilicsan inta lagu jiro alxanka. Chromium sidoo kale wuxuu leeyahay hawo sare oo oksijiin ah, wuxuu nuugi karaa oksijiinka la sii daayay inta lagu gudajiray howsha jebinta.
Daawaha loo yaqaan 'Zirconium copper alloy' looma isticmaalo oo keliya transistor signaar yar ama baakadaha awoodda leh ee transistor, laakiin sidoo kale waxaa loogu talagalay IC oo leh waxqabad aad u fiican, noocyada kala duwan ee looxyada macdanta `` lead '', furayaasha korantada sare leh, waraha iyo qaybaha kale ee elektaroonigga ah. Daawada CuZr waxay leedahay iska caabin kuleyl sare iyo jilcinta iska caabinta iyadoo lagu darayo Zr naxaas saafi ah oo aan oksijiin lahayn. Sidaa darteed, waxay soo jiidatay fiiro gaar ah maadada maadada korontada ku shaqeysata iyada oo laga faa'iideysanayo waxqabadka sare ee naxaasta aan lahayn oksijiin.
Hore: Daawada Tungsten-chromium, W-Cr
Xiga: Zirconium Nickel Alloy, Zr-Ni